Amazon inopa huwandu hwese hweecho vatauri vane Alexa | Gadget nhau
Amazon inosvitsa iwo akazara huwandu hweecho vatauri vane Alexa
Karim Hmeidan | | Amazon, Home otomatiki
2019 inoita kunge ichave iri yakajeka gore rematauri akachenjera, kana kuti, kupa imba yedu nehungwaru hwekugadzira hunogona kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore kwazvo nekuda kweinternet yezvinhu. Uye isu tinoti 2019 nekuti ndiro gore raanogona kugara muSpain, asi chokwadi ndechekuti nhasi isu tatova ne3 makuru masystem masisitimu pamusika: Imba yeGoogle, Apple HomePod, uye ichangoburwa: iyo Amazon Echo.
Uye chaizvo iyo yekupedzisira ndiyo iyo yatinokuunzira nhasi, maitiro, ayo e Alexa, iyo inogara munyika medu ine hombe assortment yemidziyo iyo pasina mubvunzo inozowirirana nezvatinoda. Mushure mekusvetuka isu tinokupa iwe zvese zvese zvetsva renji yematauri ungira , que Amazon yatanga muSpain, mamwe maspika anoshamisa nemutengo unodhura kwazvo... Ehe, ini ndato kukuudza iwe kuti kana iwe uri kufunga nezve kuwana smart mutauri, iyo Amazon Echo ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisisa pamusika, uye chakanakisa pane zvese ndechekuti Amazon ine yakaburitswa nemutengo wekusimudzira.
1 Echo, mureza weAmazon
2 Echo Uyezve, iro smart simba
3 Echo Dot uye Echo Spot, zvidiki zvinoshamisa
4 Alexa kupfuura maEchos eAmazon
Echo, mureza weAmazon
Kana paine mutauri akangwara par kugona iyo ndiyo iyo Amazon Echo, Mureza weAmazon, mukurumbira mutauri. Uye iwe unongofanirwa kuyedza kuti uone kuti, se "smart", makore akareruka kure nemutauri weCupertino: Apple's HomePod.
Unofanirwa kufunga kuti hatisi kugara tichitsvaga mutauri anotipa acoustic chiitiko chegumi, chinhu chakajairika ndechekuti kana tikatenga mutauri akangwara, tinoda chaizvo izvo kuti: mutauri agadzirise chero zvatinoda. Uye ndozvinoita chero mutauri mumhuri yeEcho ne Alexa, asi chinhu chakanaka nezve iyi Amazon Echo ndeyekuti inotipawo inopa yakakura kurira mhando.
Dhizaini yakanaka, kunyangwe yaigona kuvandudzwa, yakafukidzwa nejira rakanaka mumarudzi akasiyana siyana ayo anotumira kurira kusvika pakukwana. 7 maikorofoni, sekune vamwe vatauri mumhuri yeEcho, ndivo avo vari ckugara wakamirira isu kuti titaure izwi AlexaNdiyo panguva iyoyo apo Amazon uye kunyanya Alexa inotanga kugadzirisa izvo zvatinozviudza kuti itipe isu ruzivo rwakakumbirwa. Iwo atove akadaro hunhu inopenya halo inoratidza chinzvimbo cheedu Amazon Echo nguva dzese. Uye hongu, unogona kudzima maikorofoni pese paunoda.
Echo Uyezve, iro smart simba
Kana iyo Amazon Echo iri mureza wevaBezos vakomana, iyo Echo Plus ndiyo yekuvandudza kune iye anozivikanwa akangwara mutauri. Isu tinosvika kwaari tichitsvaga iyeye Plus anoperekedza zita rake, tichitsvaga zvinoita kuti asiyane nemunin'ina wake ... Kune misiyano, hongu, asi padanho remushandisi mushandisi hapana akawanda kudaro ...
Uye ndeyekuti padanho reruzha iyo Echo Plus zviri pachena inovandudza nekuve neakati akati kurei mutauri, yakakwana kuvhara kamuri yepakati, uye zvakare yakakwana kujoina nemamwe maAmazon Echos kuvhara nzvimbo hombe. Ehezve, chinonyanya kufadza chinhu nezve iyi Echo Plus ndechekuti inosanganisa iyo Zigbee imba automation controller izvo zvinokutendera iwe kudzora nenjere zvigadzirwa senge Philips Hue pasina kudikanwa kwemabhiriji epakati (chimwe chinhu chinoita kuti kutenga kwemamwe magadget smart kudhure).
Takakuita mutauri wedu mukuru mumba yekutandarira kuyedza neAmazon Fire Stick TV, kunyangwe zvichizonzi panguva ino hatigone kudzora Stick ne Alexa, hongu tinogona batanidza kuburikidza neBluetooth neEcho Plus. Mhedzisiro
Ini ndinokurudzira iyo Amazon Echo Plus? hongu, nguva dzose uye paunenge uchifunga kuita imba yako imba yakangwara, kana kuti zvirinani kugutsa chishuwo chako chemagadget smart. Kana zvisiri, ini ndinokurudzira kusarudza iyo yakajairika Amazon Echo, hapana mutsauko wakawanda kurira chero ... Ehezve, maererano nespika dhizaini, zvinofanirwa kutaurwa kuti isu takafarira iyo Echo Plus zvakanyanya.
Echo Dot uye Echo Spot, zvidiki zvinoshamisa
Kana tikataura nezvazvo kutakurika uye kugadzirwa isu tinofanirwa kutaura nezve Echo Dot uye iyo Echo Spot, sarudzo mbiri dzakasiyana asi iko kubatana kuchipinda. Iyo Echo Dot ndiyo yakachipa pashiri sarudzo yematauri ane Alexa, ine diki mutauri inoiyedza mukamuri yekurara inopa ruzha runogamuchirwa. Zvakanakisa izvi Echo Dot ndeyekuti isu tinogona kuibatanidza kune imwe mutauri yatinayo kumba nezwi rinoburitswa ne minijack iyo yainayo, saka tinogona kutora mukana weiyo Alexa tekinoroji muEcho Dot uye shandisa mutauri watinoda kuteerera kumumhanzi.
Zvakawanda zvinonakidza zvingave izvo Echo Spot, mutauri uyo zvakare unosanganisira diki skrini, uye rega ndikuudze izvozvo Ndiyo Echo yakanyanya kundishamisa. Ndiye akakwana shamwari patafura yedu yemubhedha, kana kubva patafura yedu tafura. Nekuona isu tinokwanisa kumisikidza a wachi kuva nenguva pedyo, kana gamuchira muchimiro che vhidhiyo chero ruzivo kubva kuAkiel hunyanzvi (Iwo madiki Alexa maficha ayo ekuramba uchienderana nezvose zvatinoda). Inzwi rarinopa rakafanana chaizvo neiyo Echo Dot, asi poindi yekuve nechidzitiro kutora iyi ungwaru yeA Alexa kuenda padanho repamusoro.
Uye hatidi kukanganwa nezvazvo Echo Sub, chishongedzo cheAmazon Echo yakagadzirwa nevakomana veAmazon (akakosha iyo redundancy): a 100w simba subwoofer iyo yaizowedzera iyo audiophile nuance yatingawana neAmazon Echo. Sezvatakambotaura, imwe Amazon Echo haigadzi kunzwika kukuru, asi kana tikabatanidza maviri pamwechete neEcho Sub ruzivo rwunogona kuve runopa mubayiro. Isu takakwanisa kuvaedza mune 2.1 gadziriso panguva yeAmazon mharidzo uye chokwadi ndechekuti yakagadzira inonakidza mamiriro ezwi.
Alexa kupfuura maEchos eAmazon
Ehe, isu tinoziva kuti vazhinji venyu munoda kukoka Alexa kuti vauye mumba menyu, asi munotya kuisa mari mumatauri akagadzirwa neAmazon kana paine dzakawanda dzimwe sarudzo kubva kune vane mukurumbira vagadziri. Amazon inoziva, chii chiAmazon chisingazive?, Uye ndosaka vaida kuti isu tikwanise kuwana maspika e vamwe vagadziri vanosanganisira Alexa tekinoroji.
Isu takakwanisa kuyedza maspika kubva kumafemu ane mukurumbira Harman kana Sonos, kuwedzera kune mamwe mafemu anodhura akadai seSystem System kana Hama, uye chokwadi ndechekuti ese anoshanda sedumwa. Uye chikamu chakanakisa ndechekuti tekinoroji yeA Alexa inoenda kupfuura maAmazon Echo vatauri.Isu takatokwanisa kuvaedza pamahedhifoni aunoona pazasi kubva kumaJabra kana maBose mabhureki, mahedhifoni anotibvumidza kuti tigare tichitaurirana nemubatsiri weAmazon. Basa rinonakidza kwazvo rinogona kuvharira vabatsiri vakaita saSiri kana Google Mubatsiri pasina dambudziko.
Isu takuudza kare, Kana iwe uchida kuyedza aya matsva Amazon Echo ne Alexa, kana chero eimwe michina inoenderana ne Alexa, usazeze kutora mukana weichi chipo yakavhurwa kubva kuAmazon, iri pasina nguva inguva yakanakisa yekunyudza zvizere muhunyanzvi hweinternet yezvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Amazon » Amazon inosvitsa iwo akazara huwandu hweecho vatauri vane Alexa
Kuongororwa kweiyo nyowani Amazon Echo Dot, huchenjeri hwemba yedu pamutengo wakanakisa
Iyi ndiyo nyowani MacBook Air uye Mac Mini 2018